Daawo: Cali Xaaji Warsame “Cabdiwali Gaas waa Hashii labada dhinac seegtay!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo: Cali Xaaji Warsame “Cabdiwali Gaas waa Hashii labada dhinac seegtay!!
Daawo: Cali Xaaji Warsame “Cabdiwali Gaas waa Hashii labada dhinac seegtay!!
Feb 10, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Cali Xaaji Warsame oo kamid ahaa Musharixiintii u taagnaa Xilka madaxwaynaha Soomaaliya ayaa Waraysi uu bixiyey wuxuu si kulul uga hadlay Madaxwaynaha Puntland iyo Madaxda kale ee maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo Qayb ka ahaa olola doorashada ee ka socday magaalada Muqdisho.
Cali Xaaji Warsame ayaa C.wali Gaas ku sheegay Hashii Labada dhinac Seegtay, Isagoo ku tilmaamay inuu Dadkiisii iyo Howlihii loo doortay dayacay, Sidoo kalana Doorashadii Muqdisho guul-daro kala Caraabay.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay Arimaha Balaadhan ee Horyaala Madaxwayhaha Cusub iyo Fursada uu Haysto.
Previous Post"Saaxiib Ii Codeey" "aan kuu Codeeyee Saaxiib Ergada yaa igu daray"!! kkkkkkkkk Next PostMadaxweyne Erdogan oo khadka telefanka kula soo xiriiray Muxamed C/ Farmaajo (Maxay ka wada hadleen?